काठमाडौंको कपनमा लिभिङ टुगेदर बसेका एक युवक र युवती मृत अबस्थामा भेटीए ! - jagritikhabar.com
काठमाडौंको कपनमा लिभिङ टुगेदर बसेका एक युवक र युवती मृत अबस्थामा भेटीए !
लिभिङ टुगेदर बसेका एक युवक र युवती काठमाडौंको कपनमा मृत भेटिएका छन् । संखुवासभा घर भएका २६ वर्षीय अमिश जिमि र खोटाङ घर भएकी युसिना राई मृत अवस्थामा भेटिएको महानगरीय अपराध महाशाखाका एसएसपी चन्द्रकुवेर खापुङले बताए ।
कपनको शिवजी चोकस्थित केटाको ठूलीआमाको घरको कोठामा उनीहरु मृत भेटिएका हुन् । युवतीको शरिरमा धा’रि’लो च’क्कुले रोपेको धेरै चो’ट दे’खिएको छ । केटाको घाँटीमा च’क्कु’ले रे’टे’को चो’ट छ । गएराति साढे १२ बजे खबर पाएर प्रहरी घटनास्थलमा पुगेको थियो । घटनास्थलमा पुग्दा युवती न’ग्न अ’व’स्थामा पल्टिरहेकी थिइन् ।
अमिश अ’र्ध’न’ग्न अवस्थामा पल्टिएको र ढुक्ढुकी भएको पाएपछि प्रहरीले उनलाई चाबहिल चोकस्थित हेल्पिङ ह्याण्ड अस्पतालमा ल्याएका थिए । तर उनको अस्पतालमा नै मृत्यु भएको जनाईएको छ ।
अमिशले प्रेमिकाको ह’त्या ग’रे’र आफुले घाँ’टी रे’टे’को हुनसक्ने प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको अनुसन्धानमा सं’ल’ग्न एकजना प्रहरी अधिकृतले बताए । उनीहरु दुवैजना पब्जीको लतमा थिए । अमिशको ठूली आमाका अनुसार २२ दिन पहिलेदेखि उनीहरु लिभिङ टुगेदरमा बस्न थालेका हुन् । कोठामा र’क्सि’को बोत्तल, चु’रो’टका ठुटा र मासु भेटिएको प्रहरीले जानेको छ ।
यो पनि, चितवन महोत्सवको तयारी ९५ प्रतिशत पूरा
विसं २०५३ देखि हरेक दुई वर्षमा महोत्सव हुँदै आइरहेको भए पनि अघिल्लो वर्ष हुनुपर्ने महोत्सव कोरोनाका कारण एक वर्ष पछाडि धकेलिएको हो । कोरोना सङ्क्रमण फैलननदिन महोत्सवको टिकटसँगै सबैलाई मास्क प्रदान गरिने जनाउँदै अध्यक्ष श्रेष्ठले महोत्सवको प्रवेशद्वारमा मास्क र स्यानिटाइजर राखिने बताउनुभयो । महोत्सवमा रहने सम्पूर्ण कक्ष बिक्री भइसकेको श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
महोत्सव प्रचार–प्रसार समिति संयोजक सुमन श्रेष्ठले महोत्सवको उद्घाटन पुस २५ गते पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गर्ने बताउनुभयो । त्यस्तै महोत्सवको समापन गर्न माघ ४ गते बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे आउने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।